Iziketi eziphathekayo zama-fat women 2015. Izitifiketi eziphezulu zezingane ezigcwele 2015, isithombe.
Imfashini yesimanje cishe ayikuhlukanisi phakathi kwezitayela ezithandwayo zabesifazanekazi abagcwele nezifanekiselo zabo kubesifazane besakhiwo esiphakathi. Ngakho-ke, singasho ngokuqiniseka ukuthi iziketi zezimfashini zabafazi abanamafutha ngo-2015 ngeke zihluke kunoma yiziphi izixazululo ezikhethekile nezitayela. Mayelana nokuthi imodeli ye-skirt ephelele ephelele izoba efanele ngonyaka ka-2015 futhi izoxoxwa kulesi sihloko.
Izitiketi eziphathekayo zonyaka ogcwele 2015: izitayela zezingqikithi
Ngo-2015, abaklami bazojabulisa abafazi abagcwele ngezingubo zemibukiso nezitayela ezahlukene. Ngakho, okokuqala ekuthandweni kuyoba khona i-skirt-ipensela. Kwabesifazane, ipensela ephakathi nendawo nobude obunamaphesenti walesi sitayela (cishe kuya phakathi kwe-shin) baphelele. Ngendlela, abanikazi bezintandokazi batusa ukuhlanganisa imodeli yama-classic ye "ipensela" kusuka ezindwangu zokugqoka kulo nyaka ngebhande elikhulu lesikhumba noma i-basque. Phakathi kwezingubo ezifashini zobude obuphakathi, abesifazane abanjengifomu kufanele baqaphele amamodeli angama-topical ngo-2015 njengengubo ye-tulip ne-skirt yelanga.
Ngaphezu kwalokho, abesifazane abashisa imfashini abanejubane bazohambisana nenye yezindlela ezihamba phambili zika-2015 - isiketi eside. Empeleni kuzoba yizibonelo eziqondile ezansi futhi zihlanganiswe iziketi ze-trapezoidal maxi. Abakhiqizi abaningi njengendlela yokugcizelela emidlalweni ende yesikhumba se-skirt baye bakhetha isikhumba esiphakeme, esivumelana nabesifazane abanefomu kanye nokusemandleni.
Iziketi eziphathekayo zonyaka ogcwele 2015: izinto ezidumile nemibala
Uma sikhuluma ngezinto zokwakha zezimpahla, khona-ke intandokazi engathandabuzeki yalesi sizini iyoba yengubo eyenziwe yesikhumba. Ngokuvamile, abesifazane abagcwele banamahloni ukugqoka lezi zembatho, ngokungafanele bakholelwa ukuthi iziketi ezivela esikhumbeni zigcizelela amaphutha. Kodwa abaklami baqiniseke ukuthi bayaphambene futhi bacebisa abesifazane nabamantombazane abashakazi ngo-2015 ukuthenga isiketi sesikhumba. Ikakhulukazi ngoba ukhetho lwezesikhumba ezigcwele ngo-2015 lukhulu: i-mini enesibindi nama-rivets nama-zippers, iziketi ze-classic-amapensele, iziketi ezidlalwayo-ilanga.
Ngaphandle kweziketi zezinwele ezinesibindi, iziketi ze-denim, ama-knitwear, uboya, isilikhi, i-chiffon nazo zizofaneleka. Ehlobo lika-2015, abesifazane abagcwele kufanele baqaphele iziketi ze-airy ezinde ngamabhetshi omdanso.
Ngokuqondene nezixazululo zombala wemfashini, 2015 izojabulisa abesifazane abagcwele abanezinhlobonhlobo zembala. Phakathi kwemibala enhle kakhulu yilezi: iwayini, obomvu, obomvu, obomvu, obomvu, obuluhlaza, omnyama. Kulo mkhuba kuyoba nemikhankaso yemibala ekhanyayo nemibala ye-pastel, ama-classics abamnyama nabamhlophe namaphethini we-geometric, ama-motifs ezimbali neziqhingi zaseScotland, imiqulu yezilwane kanye nomdwebo oqondile.
Indlela yokukhetha umbala ofanele wezingubo
I-autumn yemfashini: izinto ezintsha ku-s.Oliver Red Label ukuhlela
Izingubo zakudala zezimpahla zesifazane
Inombolo yesimo se-Spring 1: yini okufanele ugqoke i-pantyhose enemibala entwasahlobo ka-2015
Ama-pancake ashizi nama-cornflakes
Ukuphila komndeni womndeni waseSweden
Indlela yokwenza ingane ifunde izibalo
Izinqubo zokungcebeleka nge-hyaluronic acid
USvetlana Permyakova: kusuka ku-KVN kuya ku- "Internov"
Imikhuba emibi yezingane
Imikhosi enkulu yomfanekiso wesifazane
Yimaphi amatshe ayigugu afanele akulandele ngokuvumelana nesibonakaliso se-zodiac
Inkukhu ye-Kung Pao
Indlela yokufundisa ingane ukugijima ngokushesha futhi ngokufanele
Izimbongolo phezu kwembongolo ezinganeni ezisanda kuzalwa